Ngwakọta ụlọ dị mma n'akụkụ osimiri + mma!
HomeFrontlọ mmiri mara mma frontlọ Akụ Mara Mma Nice
MAKA :ZỌ: Akụ pụrụ iche dị na Playa de la Arena, Tenerife!
Ulo mara mma nke dikwa nma ma di nma na ebe di nari 100 site na La Arena beach! A kwadebere ya nke ọma!
Enweghị steepụ ịrị elu iji nweta ụlọ na ebe igwu mmiri! Ọdọ mmiri dị naanị mita 5!
Apartmentlọ ahụ nwere ọnụ ụzọ abụọ - site na ebe a na-anabata ụlọ na ebe a na-egwu mmiri!
Ezigbo ogige dị mma na ụlọ tenis na ebe nchekwa!
Ego ụgwọ obodo!
Frontlọ mmiri eji agba mmiri n'akụkụ osimiri !!